I-Galaxy Watch Active, sihlalutya iwotshi efikelelekayo evela kwi-Samsung | I-Androidsis
I-Galaxy Watch Active, sihlalutya iwotshi efikelelekayo ye-Samsung
UMiguel Hernandez | | Izaziso, Reviews, SmartWatch
Iwotshi ezi-Smart zisengubhejo wenani leenkampani ezinje ngeSamsung, iHuawei kunye neApple, nangona inye kuphela ethandwa kakhulu. Mhlawumbi yiloo nto amafemu eqhubeka nokubheja ekusasazeni rhoqo iindlela ezizezinye kwintengiso, ngumzekelo woku I-Samsung Galaxy Watch esebenzayo.
Kwakulixesha lokuba uhlengahlengiso lwamaxabiso kancinci kwimveliso engagqibi ukwandiswa ikakhulu ngesi sizathu, kwaye ke kukuba babiza phantse njenge-smartphone ekumgangatho ophakathi. Sinezandla zethu kunye nezihlahla i-Samsung Galaxy Watch Active, hlala nathi kwaye sihlalutya ngokungqongqo.
Njengamaxesha onke, uhlalutyo lwethu luya kudlula ngokunzulu kwezona zinto zibalulekileyo kwinqanaba lezinto, uyilo, ujongano lomsebenzisi kwaye ngakumbi amava asinike wona. Kule nto ungaya ngqo kwicandelo lobugcisa elinomdla kakhulu kuwe. Ukuba ukhetha ukubona ukuba ihamba njani kwaye ihamba nathi ngendlela emnandi ngakumbi, sinokuhlalutya ividiyo ngokusebenzisana nabalingane be-Androidsis esishiye entloko kweli nqaku, masiye apho, fumanisa i-Samsung Galaxy Watch Active, enye "ngexabiso eliphantsi" kwi-Apple Watch. Ukuba awufuni ukucinga ngayo kwakhona, ungayithenga kule khonkco isuka kwi-euro ezingama-199 kuphela.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Isamsung yenza lula iwotshi yakho
2 Inkqubo yomtya kunye nokujongana nomsebenzisi: Akukho bezel ejikelezayo
3 Iimpawu zobugcisa kunye nezixhobo
4 Ukuzimela kunye namava omsebenzisi
Uyilo kunye nezixhobo: Isamsung yenza lula iwotshi yakho
Isamsung izinikele ekuqhubekekeni ngokusinika iwotshi engqukuva, njengoko ibinjalo ukusukela oko yaqalayo kwaye eyahlula ngokucacileyo kukhuphiswano (iApple Watch). Sifumana i-aluminium kwi-bezels, i-2.5D iglasi eqinisiweyo ngaphambili kwaye njengesiqhelo kuluhlu lweWatch, i-polycarbonate ngasemva apho siza kufumana khona izivamvo ezihambelanayo. Ubungakanani bommandla ulingana no-1,1 intshi yescreen, ngakumbiIimilimitha ezingama-28.1 ngokujikeleza kwaye siya kuba namaqhosha amabini abekwe kwicala lasekunene,oko kuyasivumela ukuba sinxibelelane newotshi engaphaya konxibelelwano.
Ubungakanani:39.5 x 39.5 x 10.5mm
TamañoUkucofa ubukhulu: 28.1 mm
Ngamafutshane sifumana ezinye Imilinganiselo ye-39.5 x 39.5 x 10.5mmIkhatshwa bubunzima obupheleleyo beigram ezingama-25, kwaye ukuba kukho into enokubangelwa yile Galaxy Watch Active ngokuchanekileyo kukukhanya kwayo. Uya kuba nakho ukuyifumana eSpain ngombala oluhlaza, omnyama, pinki kunye nesilivere, iphalethi yombala ethembekileyo ayibi kwaphela,Kwimeko yethu sivavanya iyunithi eluhlaza ebetha kakhulu, kodwa engalungelanga uluntu olufuna into ebaluleke ngakumbi, kwimeko apho ndincoma kakhulu iinguqulelo ezimnyama nezesilivere.
Inkqubo yomtya kunye nokujongana nomsebenzisi: Akukho bezel ejikelezayo
Olunye uphawu lwekhathalogu ye-Samsung Galaxy Watch yile bezel ejikelezayo, into ekuvumela ukuba uhambe ujongano lomsebenzisi ngaphandle kokuchukumisa isikrini, kwaye ke ukuba iphaneli, ngokucacileyo, iyadinisa kumaxesha amaninzi kuthathelwa ingqalelo ubungakanani bayo kunye nobukhulu. Sifumana isikrini se-1,1-intshi kunye namaqhosha amabini ajikelezileyo kwicala lokuhamba ngeTizenOS.
Imitya yenye yecandelo elimisela kakhulu, sithanda ukuwatshintsha rhoqo hayi ngenxa yokuba ephula, kodwa nangenxa yokuba sitshintsha isitayile. Le Galaxy Watch iyasebenza Sebenzisa inkqubo yokumisa esemgangathweni kunye neyendalo iphela, oko kukuthi, uya kuba nakho ukusebenzisa phantse naluphi na uhlobo lomtyaa, kwaye awuyi kunamathela kuphela kwezo zinikezelwa yi-Samsung kwikhathalogu yayo ngaphezulu kwe-euro ezingama-30. Unokukhetha isinyithi, i-silicone, i-nylon ... iya kuxhomekeka kuwe nakwinto yonke egcina njengeAmazon bayakwazi ukukunika, Ngaphandle kwento yokuba iphakheji ibandakanya umtya we-silicone oqhelekileyo, owona uxabisekileyo xa kufikwa kwezemidlalo.
Iimpawu zobugcisa kunye nezixhobo
Isamsung ithathe isigqibo sokunyathela kumhlaba oqinileyo, ke oko kusinika unxibelelwano I-Bluetooth 4.2 yamandla asezantsi(siyakukhumbula ukuba sele sisebenzise inguqulelo 5.0) kunye I-WiFi engama-802.11bgn kwibhendi eyi-2,4 GHz.Kwinqanaba leempawu ezihambelanayo, kufuneka sichaze ngendlela ebonakalayo ukuba siya kuba nakho ukuhlawula ngayo, ukusukela okosinonxibelelwano lweNFCkwaye ke uya kuvumela ukuba kuthathwe amanyathelo afanelekileyo. Yenzelwe ezemidlalo, ngenxa yoko ayinakuphoswa I-GPS, i-accelerometer, i-barometer, i-gyroscope, umfundi wenqanaba lentliziyo kunye nesenzi sokukhanya.
Kwinqanaba le-Hardware esiza kuba nalo 700 MB RAM, Ikhatshwa yiprosesa esembini-engundoqo, kunye I-4 GB yokugcina yangaphakathi eya kuhlala kwi-1,5 GB nje ukuba inkqubo yokusebenza ifakiwe,yanele umlo olungileyo weapps ngaphakathi kwivenkile I-OS yohlobo,kodwa ayonelanga ukuba uceba ukugcina ezinye iintlobo zomxholo ezinje ngomculo okanye iiPodcasts. Khumbula ukuba sinayo Iphaneli eyi-1,1-intshi ye-SuperAMOLED ebonelela ngesisombululo sama-pixels angama-360 x 360kunye I-230 mAh ibhetrikumgca wezinye iintlobo zeewotshi. Kuncinci ukuqaqambisa kwinqanaba lezinto zehardware, apho singasayi kuphoswa nayiphi na into. Akufanele silibale ukuba sinayo umbokoukuyalela iimpendulo kunye Isatifikethi se-IP68 ngokuchasene namanzi nothuli, ukuxhasa ukuya kuthi ga kwi-5 ATM (Oko kukuthi, ungayifaka emanzini kwaye uhlambe nayo).
Ukuzimela kunye namava omsebenzisi
Ndimele ndivume ukuba ndiyayithanda loo nto Le Galaxy Watch Active inenkqubo elula yokutshaja ngaphandle kwamacingo enemigangatho yeQikwaye ikuvumela ukuba uthathe ithuba kwizinto ezininzi zezinye izixhobo ezinjengokubiza ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwezinye iifowuni. Ukuzimela kuya kuxhomekeka ekusebenziseni kwethu, kodwa kufuneka ucace ukuba xa usebenzisa i-GPS kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo, ngekhe ukwazi ukugqiba ezi ntsuku zimbini, ke kuya kufuneka uyibize ubusuku ngabunye.Amava ethu okuphuma nokubaleka ngebhayisikile kuyenze yacaca gca kuthi le nto, kuya kufuneka uyibize yonke imihla kwaye oku yeyona nto iphambili kuyo.
Ngokumalunga namava okusetyenziswa, sifumene ukufundwa okuchanekileyo kwinqanaba lokubetha kwentliziyo kwaye ngokunyanisekileyo isinika yonke into esisinika yona, I-Tizen OS ibonakalise ukuba ingaphezulu kwenkqubo yokusebenza kuphelayewatchwatch kwaye asifumananga naluphi na ukhangelo olukhangela kuyo, into engenakuthethwa nge-Wear OS. Kwinqanaba le Uyilo kunye ne-ergonomics iwotshi phantse iyimpumelelo iyonke,elula ngamanye amaxesha inomdla kakhulu, ndiyithande ngakumbi kuneGlass Watch kwinguqu yayo esemgangathweni.
Uyilo olulula kodwa olusebenzayo, olunombala olungileyo wombala kunye nemitya yonke
I-Tizen OS isebenza kakuhle kwaye inokwenziwa ngokwezifiso
Ukuhlawulwa kweQi emiselweyo
Into endiyithandayo kakhulu ngayo yinkqubo yokutshaja, kunye nenyaniso yokubaisikrini sijongeka simangalisa phantse kuyo nayiphi na imeko,kule Samsung ibalasele ngokusetyenziswa kweepaneli zayo. Ukongeza, i-Tizen OS inokwenziwa ngokwezifiso kakhulu kwaye ujongano lwayo luyakumema ukuba ngokuchanekileyo, Ndikufumanisa kunzima ukuyifaka njenge-Samsung "iwotshi enexabiso eliphantsi" kuba kufanelekile kakhulu.
Ukuzimela kunokusixabanisa isixhobo
Ndikhumbula imemori yangaphakathi ethe kratya
Kutheni ungasebenzisi iBlueooth 5.0?
Apho le Galaxy Watch Active iyasilela ngokucacileyo kulawulo,Umlindo kufuneka uhlawuliswe ubusuku ngabunye, nantoni na oyisebenzisela yona, kuba ibhetri eseleyo, ukungahoyi izinto ezinje ngeGPS okanye isivamvo sokubetha kwentliziyo, ayisayi kusivumela ukuba sigubungele olunye usuku. Ungayifumana ukusuka kwi-199,99 kwiAmazon,Ungayifumana ukusuka kwi-199,99 kwiAmazon,iwotshi ekhuthazwe kakhulu inikwe ukusebenza kwayo kunye nexabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » I-Galaxy Watch Active, sihlalutya iwotshi efikelelekayo ye-Samsung
I-Samsung Galaxy Tab S5e ilahlekelwe ngumqondiso we-Wi-Fi ukuba siyithatha ngendlela ethile
UGoogle uhlaziya ujongano lwe-Wear OS